Visa | BLI Zvikoro zveMitauro muCanada
Mabasa evadzidziVisa & Caq
Hurumende yeCanada inoda kuti vashanyi vanobva munyika dzakawanda vawane Yekugara Kwekugara Yekufamba kwenguva dzedzidzo inosvika kumwedzi inosvika matanhatu, uye Mvumo yeMudzidzi yevadzidzi vanoshuva kudzidza muCanada kweanopfuura mwedzi mitanhatu. Uye zvakare, hurumende yeQuebec inoda kuti vadzidzi vese vekunze vawane a Certificat d'Acceptation du Québec (CAQ) yevadzidzi vese vanoshuva kudzidza muQuebec kwemwedzi inopfuura matanhatu.
Mhando yevisa iwe unofanirwa inobva kune nyika yaunobva uye kune urefu hwepurogiramu yako.
Kana uchida kuuya kuCanada uye uchidzidza kusvika kumwedzi ye6, unogona kutora visa visa kana eTA (Electronic Travel Authorization) zvichienderana nenyika yaunobva.
Tsvaga kana uchida vhiza
Kana nyika yako yakanyorwa ipapo. BLI ichakubatsira kuburikidza nekugadzirisa uye ichakutumira iwe zvinyorwa zvekuchikoro zvakakodzera kuti upe nekunyorera kwako.
Mvumo Yekudzidza & CAQ
Kana iwe uri kuronga kudzidza kuBLI kwenguva yakareba kupfuura mwedzi mitanhatu, pane zvinyorwa zviviri zvaunofanirwa kuve nazvo: Canadian Study Permit uye CAQ (Quebec Kubvuma Chitupa). Kana izvi zvirizvo, iwe unofanirwa kunyorera iyo CAQ kutanga. Mushure mekutora yenyu CAQ (mavhiki 3-6 akawanda), unogona kutanga kuita kwekuwana kwako kweCanada Kudzidza Mvumo.
Nzira yekushandisa sei kuCanada Study Permit?
Nzira yekushandisa sei CAQ yako?
Ose ari maviri Quebec neCanada hurumende dzinopa mvumo yekudzidza kuvadzidzi vepasirese chete kana ivo vabvumidzwa kune chirongwa chinozivikanwa pane yakazara-nguva. Ndokumbira kuti utibate kune rumwe ruzivo.
BLI inogona kukubatsira nekunyorera kwako kana iwe uchikumbira.